မဒူဇာ ရဲ့အကွညျ့ကွောငျ့ ကြောကျရုပျဖွဈသှားကွသူမြား | မာသငျ
မဒူဇာ ရဲ့အကွညျ့ကွောငျ့ ကြောကျရုပျဖွဈသှားကွသူမြား
ဂရိဒဏ်ဍာရီလာ နတျဘုရားမတဈဦးဖွဈတဲ့မဒူဇာ (Medusa) ဆိုတာ မွှတှေအေမြားကွီးနဲ့ဦးခေါငျးပိုငျရှငျတဈဦးဖွဈပွီး ပငျလယျနတျဘုရား ဖျောဆီး ရဲ့သမီးတျော လို့လဲဆိုပါတယျ။
မဒူဇာ ရဲ့အကွညျ့ဟာ ငွို့အားပွငျးလှနျးတဲ့အတှကျကွောငျ့ သူ့အကွညျ့ကို ရငျဆိုငျမိတဲ့သကျရှိတိုငျးက ကြောကျရုပျအဖွဈ ပွောငျးလဲသှားကွပါတယျ။
ထူးခွားမှုတဈခုက …သူနဲ့အကွညျ့ခငျြးပွိုငျ၊ ရငျဆိုငျမိတဲ့သူမှသာ ကြောကျရုပျဖွဈသှားတာဖွဈပွီး၊ သူ့အကွညျ့ကို လဈြလြူရှူ၊ ရငျဆိုငျမှုမပွုခဲ့ရငျတော့ ဘာမှမဖွဈပါဘူး။
အမှနျတကယျတော့… မဒူဇာ ဆိုတာ ဂရိဒဏ်ဍာရီထဲမှာပဲ ရှိတာမဟုတျပါဘူး။
ကြှနျတျောတို့ရဲ့နစေ့ဉျဘဝမှာ မဒူဇာ ရှိနခေဲ့ပါတယျ။
နစေ့ဉျ ဘ၀ နဲ့အတူ ဖုနျး ထဲမှာ မဒူဇာ ရှိနေ ခဲ့ပါတယျ။
စတဲ့ အရာမြားကို ကွညျ့ပွီး …
ကြှနျတျောတို့စိတျတှဟော ဘာမှမလုပျခငျြ မကိုငျခငျြလောကျအောငျ ကြောကျရုပျဖွဈသှားခဲ့ကွပါတယျ။
ညို့ခကျြရဲ့စှမျးအားကွောငျ့ အပကျြသဘောဆောငျတဲ့အတှေးတှကေ စိတျရဲ့အနကျရှိုငျးဆုံးနရောထိဝငျရောကျသှားပွီး…
လုပျခငျြကိုငျခငျြစိတျ… အလငျးရောငျတှဟော အမှောငျကသြှားခဲ့ကွပါတယျ။
အမှောငျကသြညျနှငျ့ အတူ ..
ဒီအလုပျလေးတော့ ကွိုးစားကွညျ့ဦးမှ ..။
ငါ့မှာ ငှအေရငျးအနှီးမှ မရှိတာ။
ငါ အဲလောကျလဲ မတတျဘူး။
ငါ့မှာ ကြောငျးပညာရေး ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ မသငျခဲ့ရဘူး။
ငါ ဘာမှ မယျမယျရရ မတတျဘူး။
စတဲ့…. စကားလုံးတှနေဲ့မဒူဇာဟာ တဈခြိနျလုံး ညို့နခေဲ့ပါတယျ။
အဲဒီ အကွညျ့တှကေို လကျခံကွညျ့မိတဲ့အတှကျ..
ကြှနျတျောတို့ဘဝအိမျမကျ၊ရညျမှနျးခကျြတှဟော ကြောကျရုပျဖွဈသှားပွီး တစစီ ကွမှေပကျြစီးသှားပါတော့တယျ။
ကိုယျ့ဘဝအိမျမကျ၊ ရညျမှနျးခကျြတှကေို စဈမှနျတဲ့ခံစားခကျြ၊ ပွငျးပွတဲ့ဆန်ဒတှနေဲ့အကောငျအထညျဖျောနတေဲ့ မိတျဆှမြေား..
မဒူဇာရဲ့အကွညျ့ တှေ ကို ….
မကွား၊ မမွငျ၊ မကွညျ့၊ အသိအမှတျမပွုပဲ၊ လဈြလြူရှူပွီး ကိုယျလုပျစရာရှိတာကိုယျလုပျ၊ ကိုယျကွိုးစားနိုငျသလောကျကွိုးစားလုပျကိုငျမှသာ ကြောကျရုပျဖွဈခွငျး မှ ရှောငျရှားနိုငျပါမယျ။
ကြှနျတျော တို့တတှေ ….
ဖုနျးထဲက မဒူဇာ အကွညျ့တှေ၊
မကျြလုံးခငျြးစုံ၊ ရငျခုံစှာ ကွညျ့မိလို့…
ကိုယျ့ရညျမှနျးခကျြ ကိုယျ ကွိုးစား။
ကိုယျ့အိမျမကျ မပါ ပါစနေဲ့ ၊ ညီငယျ ညီမငယျမြား။ ။
မဒူဇာ ရဲ့ အကြည့်ကြောင့် ကျောက်ရုပ်ဖြစ်သွားကြသူများ
ဂရိဒဏ္ဍာရီလာ နတ်ဘုရားမတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မဒူဇာ (Medusa) ဆိုတာ မြွေတွေအများကြီးနဲ့ ဦးခေါင်းပိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး ပင်လယ်နတ်ဘုရား ဖော်ဆီး ရဲ့ သမီးတော် လို့ လဲဆိုပါတယ်။
မဒူဇာ ရဲ့ အကြည့်ဟာ ငြို့ အားပြင်းလွန်းတဲ့ အတွက်ကြောင့် သူ့ အကြည့်ကို ရင်ဆိုင်မိတဲ့ သက်ရှိတိုင်းက ကျောက်ရုပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားကြပါတယ်။
ထူးခြားမှုတစ်ခုက …သူနဲ့ အကြည့်ချင်းပြိုင်၊ ရင်ဆိုင်မိတဲ့သူမှသာ ကျောက်ရုပ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပြီး၊ သူ့ အကြည့်ကို လျစ်လျူရှူ၊ ရင်ဆိုင်မှုမပြုခဲ့ရင်တော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။
အမှန်တကယ်တော့… မဒူဇာ ဆိုတာ ဂရိဒဏ္ဍာရီထဲမှာပဲ ရှိတာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ နေ့ စဉ်ဘ၀မှာ မဒူဇာ ရှိနေခဲ့ပါတယ်။
နေ့ စဉ် ဘ၀ နဲ့ အတူ ဖုန်း ထဲမှာ မဒူဇာ ရှိနေ ခဲ့ပါတယ်။
စတဲ့ အရာများကို ကြည့်ပြီး …
ကျွန်တော်တို့ စိတ်တွေဟာ ဘာမှမလုပ်ချင် မကိုင်ချင်လောက်အောင် ကျောက်ရုပ်ဖြစ်သွားခဲ့ကြပါတယ်။
မဒူဇာရဲ့ ညို့ ချက် မိသွားခဲ့ကြပါတယ်။
ကြာကြာကြည့်လေ.. ညို့ ချက်မိလေလေပဲဖြစ်ပါတယ်။
ညို့ ချက်ရဲ့ စွမ်းအားကြောင့် အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ အတွေးတွေက စိတ်ရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံးနေရာထိဝင်ရောက်သွားပြီး…
လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ်… အလင်းရောင်တွေဟာ အမှောင်ကျသွားခဲ့ကြပါတယ်။
အမှောင်ကျသည်နှင့် အတူ ..
မဒူဇာရဲ့ မျက်လုံးတွေက ခြောက်လှန့် နေပါတော့တယ်။
ဒီအလုပ်လေးတော့ ကြိုးစားကြည့်ဦးမှ ..။
ငါ့မှာ ငွေအရင်းအနှီးမှ မရှိတာ။
ငါ အဲလောက်လဲ မတတ်ဘူး။
ငါ့မှာ ကျောင်းပညာရေး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ မသင်ခဲ့ရဘူး။
ငါ ဘာမှ မယ်မယ်ရရ မတတ်ဘူး။
စတဲ့…. စကားလုံးတွေနဲ့ မဒူဇာဟာ တစ်ချိန်လုံး ညို့ နေခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ အကြည့်တွေကို လက်ခံကြည့်မိတဲ့ အတွက်..
ကျွန်တော်တို့ ဘ၀အိမ်မက်၊ရည်မှန်းချက်တွေဟာ ကျောက်ရုပ်ဖြစ်သွားပြီး တစစီ ကြေမွပျက်စီးသွားပါတော့တယ်။
ကိုယ့်ဘ၀အိမ်မက်၊ ရည်မှန်းချက်တွေကို စစ်မှန်တဲ့ ခံစားချက်၊ ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒတွေနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့ မိတ်ဆွေများ..
မဒူဇာရဲ့ အကြည့် တွေ ကို ….
မကြား၊ မမြင်၊ မကြည့်၊ အသိအမှတ်မပြုပဲ၊ လျစ်လျူရှူပြီး ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကိုယ်လုပ်၊ ကိုယ်ကြိုးစားနိုင်သလောက်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်မှသာ ကျောက်ရုပ်ဖြစ်ခြင်း မှ ရှောင်ရှားနိုင်ပါမယ်။
ကျွန်တော် တို့ တတွေ ….
ဖုန်းထဲက မဒူဇာ အကြည့်တွေ၊
မျက်လုံးချင်းစုံ၊ ရင်ခုံစွာ ကြည့်မိလို့ …
ကျောက်ရုပ်ဖြစ်ပြီး တစစီကြေမွသွားခဲ့ကြတဲ့ 
ကိုယ့်ရည်မှန်းချက် ကိုယ် ကြိုးစား။
မဒူဇာ ရဲ့ …
မဒူဇာရဲ့ အကြည့်ကြောင့် ကျောက်ရုပ်ဖြစ်သွားကြတဲ့အထဲမှာ….
ကိုယ့်အိမ်မက် မပါ ပါစေနဲ့၊ ညီငယ် ညီမငယ်များ။ ။